UNDUNANKULU waKwaZulu-Natal uMnuz Sihle Zikalala uthe izoqina imithetho kulesi sifundazwe njengoba zikhula izibalo zabahaqwa yileli gciwane. Isithombe: Bongani Mbatha /African News Agency (ANA)
IZOQINA imithetho KwaZulu-Natal njengoba lesi sifundazwe sesingesesibili esinabantu abaningi abahaqwe yiCorona kuleli.
Izibalo zangoLwesibili zikhomba ukuthi bangu-100 494 abantu abanaleli gciwane kulesi sifundazwe. Lesi sifundazwe sesingaphezulu kweWestern Cape enabantu abangu-100 316 abanegciwane. Abahaqwa yigciwane ngosuku babalelwa ku-1 500. Ababulawe yilona bangu-1 523, abangu- 56 758 sebesindile. Isifundazwe esihamba phambili manje yiGauteng.
UNdunankulu waseKZN uMnuz Sihle Zikalala, uthe okuphoxayo wukuthi phezu kwemizamo eminingi eyenziwe nguhulumeni wesifundazwe ukunqanda ukusabalala kwegciwane kodwa izibalo zisalokhu zikhula.
“Imithetho isizoqina, isimo esikhona manje siyaphoqa ukuthi kulawulwe ukuhamba kwabantu. Uma sekushaye * -9 ebusuku akuvumelekile ukuhamba kwabantu.
“Kuzoba nezivimbamgwaqo ezizobe zithe chithi saka esifundazweni. Umkhandlu wesifundazwe obhekele imithetho ebekelwe ukulwa nokubhebhetheka kwegciwane kungenzeka uphinde ubeke eminye imigomo eyengeziwe,” kusho yena.
Uthe njengoba izibalo sezikhomba ukuthi isifundazwe sesibhekene nesivunguvungu segciwane kusho ukuthi kuzoba nabantu abaningi abazohaqwa yilona, kubona abanye bazoshona yingakho kumele abantu bashintshe indlela abenza ngayo izinto.
“Kumele sishintshe indlela yokuziphatha, sekusezandleni zomuntu ngamunye ukuthi anqande ukusabalala kwegciwane.
“Ngiyazi ukuthi kulesi sifundazwe kusenabantu ababa nemihlangano, nemicimbi okuyinto eyaziwayo ukuthi yandisa ukusabalala kwegciwane,” kusho yena.
Inyunyana yabahlengikazi iDenosa ithe ukunyuka kwezibalo zabahaqwa yiCorona kuyakhathaza.
UNobhala wenyunyana kulesi sifundazwe uMnuz Mandla Shabangu, uthe uMnyango wezeMpilo awunalo uhlelo olubambekayo lokubhekana negciwane.
“ Isifundazwe saqala ukuba nomuntu onegciwane ngoMashi. Kusukela ngaleso sikhathi izinhlelo zokunqanda ukusabalala kwalo ziyefana, njengamanje sinabantu abangu-100 494 kodwa azikho izinhlelo ezengeziwe ezenziwe,” kusho yena.